Wararkii ugu dambeeyey ee lahaystayaal Masaari ah oo ka fakaday burcad badeed Somali ah. [Akhris …] – Radio Daljir
Wararkii ugu dambeeyey ee lahaystayaal Masaari ah oo ka fakaday burcad badeed Somali ah. [Akhris …]
Laasqoray, Aug 14 – Labadii maalmood ee ugu dambeeyey deeganada Puntland waxaa ka dhacay dhacdooyin is huwan oo dhammaantoodba la xiriiray ka hortagidda Burcadbadeeda, kuwaasi oo ka dhacay meelo kale duwan oo ka mid gobollada Bari iyo Sanaag.
Galabnimadii Khamiista dagaal xooggan ayaa Burcadbadeed iyo laheystayaal Masaari ah ku dhexmaray duleedka tuulada Gacan oo ka tirsan gobolka Sanaag, kaasi oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida ay sheegeen mas?uuiliyiinta gobolka Sanaag ee Puntland dagaalka ayaa hal mar ka curtay dhusha laba doonyood oo laga leeyahay dalka Masar oo muddo 4 bilood ah kooxo Burcadbadeed Soomaali ah ay afduub halkaasi ugu haysteen, waxaana raq iyo ruuxba la arkay hal nin oo ka tirsanaa Burcadbadeeddii Soomaalida kaasi oo isagoo dhaawac ah u soo dabaashay dhinaca xeebta hadana lagu daweynayo isbitaal ku yaalla magaalada Baran.
Ninkaasi dhaawacaa ayaa sheegey inuu arkayey laba nin meyd ah oo ka tirsan raggii Burcadda ahaa ka hor intuu uusan isku tuurin badda si uu naftiisa u badbaadiyo.
Laheystayaashii Masaarida ahaa ayaa ku guuleystay inay maxaabiis ahaan u kaxeystaan wixii kaharay burcaddii intay dileen mooyee, waxaana dagaalku dhashay ka dib markii laheystayaashu heleen fursad ay ku dagaalamii karaan, taas oo ka dhalatay habacsanaan ka jirtay dhinaca Burcadda.
Dhinaca kale ciidanka boliiska ee Puntland ayaa maalin ka hor weerar ku qaaday tuulada Shimbiraale oo ku dhaw magaalada Bossaso halkaasi oo loogu sheegey inay ka duulayeen koox Burcadbadeed ah si ay maraakiib u soo afduubtaan, waxaana ciidanku guuleysteen inay qabtaan hubkii ay raggaasi wateen oo ka koobnaa Shan qori oo nooca fudud ah 2 Baasasuuke laakiin ciidanku kuma guuleysan inay qabtaan raggaasi oo waa ay baxsadeen.
Saraakiisha ammaanka ee Puntland ayaa shir ay ku qabteen dakadda magaalada Bossaso ka dib markii hubkaasi la soo bandhigay waxay sheegeen inay sii wadayaan hawlgallada ay kula dagaalamayaan Burcadda badaha.
Taliye ku xigeenka ciidanka bileys-ka Puntland Maxamed Siciid Jaqanaf ayaa halkaasi ka sheegey inay laba jibbaarayaan la dagaalanka Burcab-badeedda si loo qabto wax ka wanaagsan wixii hore.
Isla maalintii Khamiista mas?uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka dakadaha ayaa la kulmay saraakiisha horkacaya ciidamada NATO ee jooga xeebaha Somaliya gaar ahaan xeebaha gobolka Bari, shirkaasi oo ka dhacay meel aan ka fogeyn magaalada Bossaso ayaa lagu falanqeeyey sidii laysaga kaashan lahaa la dagaalanka Burcadbadeedda.
Shirkaan oo ka dhacay dusha Markab uu leeyahay Ingiriisku oo la yiraahdo F99 ayaa lagu ballamay in si buuxda loola dagaallamo Burcadbadeedda.